यस्तो छ सेल्फीको इतिहास – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १८ आश्विन २०७७, आईतवार १६:०३
काठमाडौं । आजको समयमा सेल्फीको क्रेज जो कोहीमा पनि देख्न सकिन्छ । अत्याधुनिक मोबाइल फोनमा रहेका शक्तिशाली क्यामराहरुले मानिसहरुको सेल्फी कल्चरलाई बढावा दिइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको सेल्फीको इतिहासका बारेमा तपाईंलाई कत्तिको थाहा छ ?
भ्यागुताको पूजा हुने अनौठो मन्दिर
बजेटबाट छुटैछुट, कुन क्षेत्रलाई कति ?
चक्रवात ताउकतेको नेपालमा असर, शुक्रबारसम्म पानी पर्ने !
दोस्रो चरणको कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी युवा सङ्क्रमित!
यी लक्षणले बताउँछन् भिटामिन सीको कमी, आँखाको ज्योति जाने…
किन राख्छन् महिला ४० कटेपछि विवाहेत्तर सम्बन्ध ? यस्ता छन्…